သင် ယုံကြည်အားထားနိုင်သော စာရင်းကိုင်ပညာရှင်များ
We manage your accounting, so you can manage your business
Balance is an accounting, tax, consulting and business advisory firm established to provide its clients & community with high quality and professional services. Balance is founded on the integrity, trust, accountability & commitment of our people. We strive to serve our clients by adhering to our own standard of excellence.
ကျွန်တော်တို့ Balance အဖွဲ့ဟာ မြန်မာနိုင်ငံရှိ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ နှင့် အဖွဲ့အစည်းများအား စီးပွားရေးပိုင်း၊ လုပ်ငန်းပိုင်း၊ အခွန်ပိုင်း နှင့် စာရင်းဇယား ဆိုင်ရာ အထောက်အကူပြု ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ဟာ ရိုးသားဖြောင့်မတ်မှု၊ ယုံကြည်မှု၊ တာဝန်ယူမှု နှင့် နစ်မြှုပ်ဆောင်ရွက်မှုများအပေါ် အုတ်မြစ်တည်၍ တည်ထောင်ထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ လုပ်ငန်းရှင်များ၏ အောင်မြင်မှုအတွက် အရည်အသွေးမြင့်မားမှုကို စံနှုန်းတစ်ခုအဖြစ်သက်မှတ်၍ ကြိုးစားဝန်ဆောင်မှုပေးလျက်ရှိပါသည်။
လုပ်ငန်းရှင်များ၏ Success ကို အဓိကထားသော အဖွဲ့အစည်း
Success Focused Service Team
We are focused on delivering value in international standardized & trustworthy accounting and other business services in Myanmar.
Balance Professional Services ၏ Mission မှာ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအား နိုင်ငံတကာစံညွှန်းနှင့် ညီသော/ စိတ်ချယုံကြည်ရသော စာရင်းဇယားပိုင်း ဝန်ဆောင်မှု နှင့် အခြားစီးပွားရေး ဝန်ဆောင်မှုများ ဆောင်ရွက်ပေးရန်ဖြစ်သည်။
ပညာရပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ နှင့် လုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်၍ အရည်အချင်းပြည့်ဝသော ပညာရှင်များ
Professionals With Technical & Practical Know-How
Our vision is to becomealeading regional player in the Accounting & Business Services industry in Myanmar. We aim to achieve this via our professional services and commitment to enriching the capacity of the Myanmar business community
ကျွန်ုပ်တို့၏ ရည်မှန်းချက်မှာ စာရင်းဇယားပိုင်း ဝန်ဆောင်မှု နှင့် အခြားစီးပွားရေး ဝန်ဆောင်မှုများတွင် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ထိပ်တန်း အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်လာရန် ဖြစ်သည်။ ဤရည်မှန်းချက်ကို ကျွန်ုပ်တို့၏ ပညာရပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်မှု နှင့် လုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်မှုကို အခြေခံ၍ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရင်း မြန်မာနိုင်ငံရှိ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၏ လုပ်နိုင်စွမ်းကို တစ်ဖက်တစ်လမ်းမှ မြှင့်တင်ပေးသွားရန် မျှော်မှန်းသည်။
Articles by Balance Accounting Services Mandalay
Mindsets that Lose Your Business
Business Advice, Accounting
Fear of Foreign Investors in Myanmar
Importance of Accurate Financial Statements
Cash Accounting & Accrual Accounting
SME, Business Advice
Family Businesses Q&A
Story of Balance Accounting Services Mandalay
Success Focused Accounting Team
Mission Statement of Balance Accounting Services Mandalay
Technical & Practical Professionals
Vision Statement of Balance Accounting Services Mandalay
Feature Articles by Balance Accounting Mandalay